Na-atụ aro ịgụ maka oge okpomọkụ a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na-atụ aro na-agụ nke a n'oge okpomọkụ
Carmen Guillen | | Genres, Akwụkwọ, Akwụkwọ, ọtụtụ
El okpomọkụ Emeghere ya na peninsula ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na ị na-ekwu okwu ihu igwe, ọ nọnyeere anyị ogologo oge. Ndị ọzọ na ndị na-erughị uru ha ezumike udu mmiri ka nwere akwukwo Na akpa, n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na ọdọ mmiri, ọ bụ ebe izu ike ịhapụ ihe ọ bụla ma nyefee onwe gị na izu ike na akwụkwọ ozi.
Ọ bụrụ na ị si gụkwuo n'oge ọkọchị na n'oge ọ bụla ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu ndị na-anaghị aga n'ụsọ osimiri na-enweghị akwụkwọ iji soro ha, nke a bụ isiokwu gị. Anyị ga-enye gị usoro ọgụgụ ọgụgụ akwadoro maka oge ọkọchị a. Debanyere aha?
1 «Elela anya n'okpuru akwa» nke Juan José Millás dere
2 "Nzube nke ndị nzuzu" nke John Kennedy Toole dere
3 "Snow White ga-anwụ" nke Nele Neuhaus
4 "Nwanyị bi" nke Gioconda Belli
5 "Akwụkwọ ndetu Don Rigoberto" nke Mario Vargas Llosa dere
«Elela anya n'okpuru akwa» nke Juan José Millás dere
Mgbe ụfọdụ ihe dị ka ubochi kwa ụbọchị dị ka ohere ị ga-ezute n'oge ị na-agagharị n'okporo ụzọ ụgbọ oloko nwere ike ịmalite mmalite nke omume nwere ike inye ndụ ndụ ọhụụ. Nke ahụ bụ ihe ga-eme ikpe Elena Rincón, otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma nke Juan José Millás kere n'oge ọ na-ede akwụkwọ. Achọla n'okpuru ndina bụ akwụkwọ akụkọ gbasara mmekọrịta na enweghị nhatanha nke ndị di na nwunye na nchọta ụwa maka mkpakọrịta na mmetụta ịhụnanya. Ma, dị ka ọ dị na onye edemede ahụ, banyere eziokwu ọzọ ahụ nke a na-egosi kwa ụbọchị site na mkpokọta nke anyị kwenyere na ọ ga-agbanwe agbanwe, yana njikwa nke akụkọ akụkọ ya na njikọta nke sitere na ihe nkiri ruo ọchị., Na-agabiga asusu na ihe mgbagwoju anya nke mgbọrọgwụ na-enweghị isi, Millás jisiri ike ịmepụta akụkọ na-akpali akpali nke na-adọrọ mmasị onye na-agụ ya ibi ndụ nke ụda ya na ihe ịtụnanya ya.
Ọnụ ya na Editorial Point nke Ọgụgụ anaghị agafe 9 euro na ọ bụ akwụkwọ peeji 171, yabụ ọ dịkwa mkpụmkpụ ma nwee njikwa iji soro gị gaa ebe ọ bụla.
"Nzube nke ndị nzuzu" nke John Kennedy Toole dere
Conjuju nke ceciuos Ọ bụ nzuzu, acid na ọgụgụ isi. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, ọ dịkwa oke ọchị ma dịkwa ilu n'otu oge ahụ. Ọchị gbapụrụ n'onwe ya tupu ọnọdụ adabaghị adaba nke oke ọdachi a. Ignatius J. N'ezie O nwere ike ịbụ otu n'ime ndị kachasị mma e kere eke na onye ọtụtụ anaghị ala azụ iji tụnyere Don Quixote. Ọzọkwa, ọ bụ onye na-emegide iwu zuru oke maka akwụkwọ edemede jupụtara na njirimara mara mma, edobere na ọdụ ụgbọ mmiri nke New Orleans, bụ ezigbo Ignatius. Aghọtaghị ya, onye dị afọ iri atọ nke bi n'ụlọ nne ya na onye na-agba mbọ inweta ụwa ka mma n'ime ụlọ ya. Mana obi ọjọọ ga-adọkpụrụ ya ka ọ na-awagharị n'okporo ámá ndị dị na New Orleans na-achọ ọrụ, na-amanye ịbanye na ọha mmadụ, nke ya na ya na-enwe mmekọrịta nke ịsọ oyi, iji nwee ike ịkwụ ụgwọ mmefu nne ya kpatara n'ihe mberede ụgbọ ala Anọ m na-a drunkụbiga mmanya ókè.
N’uche m, ọ bụ akwụkwọ ị ga-agụ opekata mpe na ndụ gị.
"Snow White ga-anwụ" nke Nele Neuhaus
N’ụbọchị ọnwa Nọvemba gbara ọchịchịrị, ndị ọrụ na-ahụ ọkpụkpụ mmadụ na ọdụ ụgbọ elu US Army mbụ n’obodo dị nso na Frankfurt. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, mmadụ na-akwa nwanyị n'elu akwa mmiri. Nnyocha ahụ na-ewe ndị Commissioners Pia Kirchhoff na Oliver von Bodenstein n'oge gara aga: ọtụtụ afọ gara aga, na obere obodo Altenhain, ụmụ agbọghọ abụọ funahụrụ n'enweghị ihe ọ bụla. Usoro ikpe dabere na ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ mere ka onye ahụ boro ebubo na ọ bụ Tobias mere mkpesa. Ugbu a, ọ laghachila obodo ya. Ọnwụ nke nwa agbọghọ ọzọ ga-ewepụta ezigbo ichu nta nke ndị amoosu.
Na-atụ aro karịsịa maka ndị na-agụ akwụkwọ nke enyo.
"Nwanyị bi" nke Gioconda Belli
Akụkọ a na-egosipụta ọgụ dị egwu na obi ike ndị nwere ike igosipụta ndị mpako nke ịbụ ndị ọdịbendị ma jiri mmụọ na-agbaso echiche ya, obodo ha na ezinụlọ ha, nwere ike inupụ isi megide mmegbu na ikpe na-ezighị ezi, ọbụnadị itinye ya n'ihe egwu ndụ. Akụkọ a na-akọ banyere otu nwanyị aha ya bụ Lavinia, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke na-agbaji ụdị echiche nke ọha mmadụ bi na ya, na-ahapụ onwe ya n'aka ndị mụrụ ya ibi akụkọ nke ya, yana nchegbu na echiche nke oge a. N'otu oge ahụ, Itzá pụtara, onye ekpughere akụkọ ya ka egwuregwu ahụ na-apụta. N’ikpeazụ ụmụ nwanyị abụọ ahụ bịakọtara ọnụ, n’ụzọ anụ ahụ na n’uche, na mgba ha gara aga na nke ugbu a gbanwere ka ha bụrụ otu mgba nwere mmụọ, nwanyị ahụ maka ụwa ka mma.
Maka ndị anyị na-eche n'echiche dị iche iche iji chebe onwe anyị.
"Akwụkwọ ndetu Don Rigoberto" nke Mario Vargas Llosa dere
Akwụkwọ Don Don Rigoberto bu ihe ederede ojoo nke Mario Vargas Llosa dere, Nobel Prize for Literature na 2010.
Ebumnuche nke akụkọ a dabeere na usoro ederede nke Rigoberto, onye njikwa nke ụlọ ọrụ mkpuchi nke na-ezere eziokwu nke ụbọchị ọ bụla, na-ekwupụta echiche ya na agụụ mmekọahụ ya na ụfọdụ akwụkwọ.
Ihe odide niile dabere na ọrụ nka, ma nke eserese, nke egwu na nke ederede nke sitere n'ike mmụọ nsọ. N'ime ha bụ: Mmalite nke ụwa y Umengwụ na agụụ ihe ọjọọnke Gustave Courbet; Igba ọtọ na pusinke Balthus dere; Diana na ndị enyi yanke Johannes Vermeer dere; La Priere y Kiki de Montparnasse n'azụ nke Man Ray, na-ebipụta agụụ nke Utamaro ma ọ bụ Igwe turkish ahụsite n'aka Jean Auguste Dominique Ingres.
Kedu ihe ị chere banyere akwụkwọ ndị a anyị na-akwado? Yougụọla ha? Mee ka anyi jiri aka gi guo ogu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Na-atụ aro na-agụ nke a n'oge okpomọkụ
A na ere ya "Kuziere m igwe igwe", nke Lof Yu dere, akwukwo akwukwo ndi ntorobia nke na adighi nma